Genocide Crime ခေါ် လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုကြီး (အမြည်း) | Ko Rohingya
(၃) လူအုပ်စုဝင်များ၏ လူနေမှုဘဝ အခြေအနေများကို ထိခိုက်နစ်နာအောင် တမင်တကာ ရည်ရွယ်၍ အုပ်စုတခုလုံးကိုဖြစ်စေ (သို့မဟုတ်) တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ဖြစ်စေ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြင့် ထိခိုက်ပျက်စီးစေခြင်း။
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့တွင် ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာ အကြမ်းဖက်သမားများမှ ယင်း ဒေသတွင် ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ နေထိုင်လာခဲ့ကြသော အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တိုင်းရင်းသား ရိုဟင်ဂျုာလူမျိုး (၅၀၀၀၀) ကျော်ကို အိုးအိမ်တွေကို မီးရှို့၊ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်မှုတွေလုပ်၊ ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကို မတရားသိမ်းပိုက် ဖျက်စီးပြီး၊ ဒုက္ခသည်များ နေထိုင်ရာ ဌာနတွေ အသီးသီး ဖန်တီးပြီး ထားခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် အခြား အထောက်အထားပေါင်းများစွာ ရှိနေပါသေးသည်။ အောက်ဖော် ပြပါ လင့်ခ်မှ ဗီဒီယို ကြည့်ပါ။
(၄) လူအုပ်စုဝင်များအတွင်း ကလေးမွေးဖွားမှု (မျိုးပွားမှု၊ လူဦးရေ တိုးပွားမှု) ကို တားဆီးရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် လိုက်နာချက်များ သတ်မှတ်၍ လိုက်နာစေခြင်း။
ဤအချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးလည်း တိရိစ္ဆာန်ကုဆရာဝန် ဦးအေးမောင် ဦးဆောင်တဲ့ ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာအကြမ်းဖက်နိုင်ငံရေးအသင်းကြီးဖြစ်တဲ့ RNDP ပါတီကြီးမှ ဦးစီး၍ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးစုများ၏ ကောင်းမွန်စွာ အိမ်ထောင်ပြုသားမွေးခြင်းကို မျိုးပွားမှု၊ လူဦးရေတိုးပွားမှုကို အကြောင်းပြုပြီး တာဆီးဖို့ ကြိုးစာခဲ့ကြောင်းနှင့် ကြိုးစားနေ ကြောင်း အခိုင်အမာ သက်သေများ ရှိနေပါသည်။ ဤအထဲတွင် ရခိုင်လူမျိုး နစက ကွပ်ကဲရေးမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်နိုင်ဦးလည်း ပါဝင်နေပါသည်။ ယင်းအချက်နှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ပါလင့်ခ်များရှိ ဗွီဒီယိုများကို ကြည့်ပါ။ ဗိုလ်မှူးချုပ် အောင်နိုင် ဦးအား RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်ကျော်အောင်မှ တွေ့ဆုံ မေးမြန်းထားခြင်း ဖြစ် သည်။ ယင်းအင်တာဗျူးတွင် ရခိုင်လူမျိုး၊ နစကကွပ်ကဲရေးမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင် နိုင်ဦးက ဒေသန္တရအမိန့်အရ ၁၉၉၈ မတ်လ ၃၁ နေ့ကတည်းက ကလေးမွေးဖွား မှုကို ထိန်းချုပ်ရန် ရည်ရွယ်၍ တစ်လင်တစ်မယားစနစ်ကို ပြဌာန်းခဲ့ကြောင်း ပြောထားပါသည်။ ဤရခိုင်လူမျိုး နစကကွပ်ကဲရေးမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် အောင်နိုင်ဦးမှ လူသားတွေ မွေးဖွားခြင်းကို တိရိစ္ဆာန်တွေအတွက် အသုံးအနှုန်းဖြစ်တဲ့ ပေါက်ပွား နှုန်းဆိုပြီး မြန်မာစာပေနဲ့ ဘာသာစကားကို ရခိုင်တစ်ဦးမို့ ကောင်းစွာ မတတ် မြောက်လို့လား (သို့) တမင် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ရိုင်းစိုင်းစွာ သုံးစွဲသွားခဲ့လေသလား ဆိုသည်ကို ကျနော် မသိပါ။ သို့သော် စစ်တပ်ကွပ်ကဲရေးမှူးတစ်ဦးအနေနှင့် ဤသို့ ရိုင်းစိုင်းစွာ မသုံးနှုန်းသင့်ပါ။
(၅) လူအုပ်စုတစ်ခုအတွင်းမှ ကလေးများအား တခြား လူအုပ်စုတစ်ခုအတွင်းသို့ အတင်းအဓမ္မ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း စသည့် လုပ်ရပ်များကို ပြုလုပ်ကျူးလွန်ခြင်းသည် ပင် Genocide ရာဇဝတ်မြောက်ကြောင်း ပြောဆိုထားသည်။ ကျူးလွန်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့တွင် ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာအကြမ်းဖက်သမားများ အဲဒီ ဒေသမှာ ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ နေထိုင်လာခဲ့ကြသော အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တိုင်းရင်းသား မုစ်လင်မ် ထောင်ပေါင်းများစွာကို ၎င်းတို့၏ အိုးအိမ်တွေကို မီးရှို့ ဖျက်စီး၊ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်မှုတွေလုပ်၊ ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကို မတရား သိမ်းပိုက် ဖျက်စီးပြီး၊ ဘင်္ဂါလီတံဆိပ်ရိုက်နှိပ်၍ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်များ နေထိုင်ရာ ဌာနတွေ ဖန်တီးပြီး ထားခဲ့ပါသည်။ ထိုမုစ်လင်မ်များတွင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တိုင်းရင်းသား ကမန်လူမျိုးများရဲ့ ကလေးသူငယ်များလည်း ပါရှိနေပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ကမန်လူမျိုးကလေးသူငယ်များအား ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးစုအတွင်းသို့ ဘင်္ဂလီ တံဆိပ်ရိုက်နှိပ်ကာ အတင်းအဓမ္မ ပြောင်းရွှေ့ခိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ အောက်ပါ လင့်ခ်များရှိ ဗီဒီယို ကြည့်ပါ။ ထို့အပြင် အခြား အထောက်အထားပေါင်းများစွာ ရှိနေပါသေးသည်။
ကိုယ်၊ စိတ်၊ ၀ိညာဉ်သုံးပါစလုံး အေးချမ်းကြပါစေ။
မှတ်ချက် ။ ။ ကိုးကားချက်များကို တစ်ချို့ သတင်းဌာနများ၊ ဖဘများနှင့် Youtube မှ ယူထားပါသည်။
PDF ဖိုင်ဖြင့် ဒေါင်းချင်သူများအတွက် လင့်ခ်များ
This entry was posted on March 2, 2013, in ဗီဒီယို, ရိုဟင်ဂျာ, ဆောင်းပါး and tagged ကမာန်, ကုလား, ချမ်းမြေ့, စကားစစ်ထိုးပွဲ, စစ်အာဏာရှင်, တိ/ကု အေးမောင်, တိုင်းရင်းသား, ဓာတုသိန်းစိန်, ဗိုလ်နေ၀င်း, ဘာသာရေး, ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်း, ရခိုင်, ရခိုင်ဘုန်းကြီး, ရခိုင်အကြမ်းဖက်ပါတီ, ရခိုင်အကြမ်းဖက်သမား, ရိုဟင်ဂျာ, လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုကြီး, လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်း, သမိုင်း, သားသတ်သမား, အစွန်းရောက်, ဦးခင်ရီ, ဦးသိန်းစိန်, ဒေါက်တာအေးချမ်း, ဒေါက်တာအေးမောင်, RNDP ပါတီ. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ကြရမဲ့ စာတမ်း
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မြန်မာ့တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စုကြီး (၅) စု →